झुप्रीलाई गाउँ फर्कनै मन छैन
भगवानले पनि जन्म दियो आँखा दिन, भगवानले पन ऽऽऽ
दूधै नलाई कन आमाले मा*रिनन् किन, दूधै नलाई कन ऽऽऽ
लैजा का*ल मलाई मन छैन संसारमा रने, लैजा का*ल मलाई ऽऽऽ
आमा दूध नलाई मा*र्दिउ भन्ने याद आएन आमा दूध नलाई ऽऽऽ
अछाम तारेखा गाउँको वनपाखामा गुञ्जिरहने यो गीत आजभोलि ‘भ्वाइस आफ नेपाल’को एउटा कोठामा गुन्जिरहेको छ । झुप्री भण्डारीले आफ्नो जीवनको दुःख मथेर यो ठाडी भाका तयार पारेकी हुन् । उनीसँग दृष्टि छैन तर, निकै कममा हुने कर्णप्रिय स्वर छ । त्यही स्वरमा आफ्नो जीवन भोगाईको सानो अंश शनिबार रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को ब्लाइन्ड अडिसनमा गाइन् । अनि दर्शकको आँखामा छाइन् ।
झुप्री बीचबाट सिउँदो काँटेर चिटिक्क एक चुल्थे कपाल बाटेकी छिन् । घाँटीमा तीन वटा पोते छन् । एउटा पहेँलो तिलहरी । तिलहरी ग्यारेण्टी वाला रे । काठमाडौं आउँदा सदरमुकाम मंगलसेनमा किनेको । घाँटीमा टमक्क चाप बाँधेकी छिन् । भन्दैछिन्, ‘चाँप बाँध्न त मन पर्छ नि ! बरु नयाँ कपडा लगाउँनै मन पर्दैन ।’
यतिबेला भने झुप्री रातो रङको फुलबुट्टे नयाँ कुर्ता सुरुवालमा सजिएकी छन् । त्यही कुर्तामा उनी दुई हप्तादेखि भ्वाइस अफ नेपालको बन्द प्रशिक्षणमा छिन् ।र, पनि झुप्रीलाई बाँच्नै मन छैन । किन ? यसको जवाफ उनीसँग होइन उनको समाजसँग छ । जुन समाजमा उनले अ*पमान, घृ*णा र तिर*स्कार पिउँदै जीवनको ३० वर्ष बाँचिन् ।
उनले १३ वर्षको उमेरमा मुसाको वि*ष सेवनको गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनलाई लागेको थियो, ‘पल पल म*रेर बाँच्नुभन्दा एकै पटक म*र्नु आनन्द ।’ तर, झुप्रीको शरीरले त्यो वि*ष पचायो ।
एक जना दिदीपछि झुप्री जन्मिएकी थिइन् । उनीपछि दुई भाइ र एउटी वहिनी जन्मिए । मंगलसेन नगरपालिका ६ ठूलासेनाको त्यो भिरालो पाखामा दृष्टिबिनाकी झुप्रीले बल्यकालमा कति संघर्ष गर्नुपर्‍यो ? यो सबै सुनाउन झुप्री उत्साहित छैनन् ।
बरु म*र्नका लागि गरेको संघर्ष पो सुनाइन् । जसको लागि उनले १३ वर्षको उमेरमा मुसाको वि*ष सेवनको गरेकी थिइन् । त्यतिबेला उनलाई लागेको थियो, ‘पल पल म*रेर बाँच्नुभन्दा एकै पटक म*र्नु आनन्द ।’ तर, झुप्रीको शरीरले त्यो वि*ष पचायो ।
अर्को पटक फेरि मेटासिट पिइदिइन् । निकै असहज मान्छिन्, झुप्री खुल्नलाई । उलने असहज कुरा नै भनिन्, ‘मलाई त कालले पनि माया गरेन ।’
झुप्रीको उमेरको ग्राफ जतिजति उकालो लाग्दै जान्थ्यो, आफ्नो जीवनलाई उनले त्यति त्यति नै सराप्न थालिन् ।किनकी साथीहरुले साथ छाडे । उनीसँग हिँड्ने कोही भएनन् । जता हिँड्थिन, एक्लै हन्थिन् । र, सोच्थिन्, ‘मैले पनि देख्न सक्ने भएका त साथी हुन्थे होला नि है ।’
विस्तारै घर भित्रको काम सम्हाल्न थालिन् । दैलो लिप्थिन्, खाना पकाउँथिन्, भाँडा माझ्थिन्, गाईवस्तुको स्याहार गर्थिन्, धारासम्म पुगेर पानी बोकेर पनि ल्याउँथिन् ।
तर, गाउँका मानिस कोही पनि उनको नजिक पर्दैनथे । कति त बाटोमा हिँड्दा पनि तल झर्थे । केटाकेटीहरुले गर्ने खिसिट्युरीको धारिलो बाँणले उनलाई विछिप्त पार्थे । झुप्रीलाई माया भन्ने के हो थाहा थिएन । यतिसम्मकी उनी बाँचेकोमा आफन्तहरु नै खुशी थिएनन् ।
निराशाको पोको फुकाउँछिन्, ‘गाउँमा कसैले राम्रो भन्दैन । कहिलेकाँही नयाँ कपडा लगाएको दिन पनि गाउँलेले यस्तीलाई पनि के नयाँ कपडा चाहिएको होला भनिदिन्छन् ।’
झुप्री यसरी जन्मिनुमा उनको के दोष ! तर, समाजबाट उनैमाथि दोषहरु बर्सिरहे ।
यस्तै व्याथालाई झुप्रीले गीतमा उन्न थालिन् र गाउन थाल्थिन् । तर, कसैले सुन्यो भने उनलाई भन्थे, ‘यस्तो मान्छेले के रहरले गीत गाउन परेको हेला ।’
परिणाम, उनी डरैडरले कसैको कसैको अगाडि गीत गाउन नसक्ने भइन् । न कसैको अगाडि गएर गर्वका साथ उभिन्थिन् । उनको सबैभन्दा नजिकको साथी कोही थियो भने गीत नै थियो । र, अर्को साथी– आँशु । उनलाई संसारमा सबैभन्दा मन पर्ने भनेकै दुई कुरा हुन्, ‘एउटा रुनु र अर्को आँशु गाउनु ।’
झुप्री आफ्नो दुःखमा बाँचिरहेकै थिइन् । उनलाई लाग्थ्यो कि तारेखा बाहेक अर्को संसार छैन । एक दिन दुई भाइका दुई छोरा स्याहार गरेर घरमा बसिरहेकी थिइन । उनको कथा सुन्न विद्या चापागाईं पुगिन् । कलेटी परेको कुर्तामा उनले निकै सुन्दर गीत गाइन् । गाएपछि धेरैपछि खुलेर हाँसेकी थिइन् ।
भनेकी थिइन्, ‘मैले के गाउँछु र ! मेरो गीत कसले सुन्ने हो र !’ खासमा झुप्री कुस्तुरी जस्ती थिइन्, जो आफ्नो पेटको सुगन्धयुक्त विना बाकेर सुगन्ध खोज्न दौडिरहन्छ ।
त्यसलनाई नजिकबाट नियालिरहेका थिए छिमकी कमल भण्डारी, जसले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को स्टुडियोसम्म ल्याए । नत्र उनको जिन्दगी काठमाडौं नदेखेरै सकिन्थ्यो कि ! ६ जेठ । त्यो दिन झुप्री साढे पाँच बजे नै उठिन् । ७० वर्षीय बाबाको हात समाटिन् र साढे छ बजे बाटो लागिन् । आधा घण्टा हिँडेपछि मोटरबाटो आइपुग्यो ।
अनि झुप्री जीवनको पहिलो पटक गाडी चढिन् । काठमाडौं आइपुग्न उनी हिचकिचाएकी थिइन् । कमल पनि उनीसँगै थिए । बसमै उनले भनेकी थिइन्, ‘मैले के गाउँछु र ! मेरो गीत कसले सुन्ने हो र !’ खासमा झुप्री कुस्तुरी जस्ती थिइन्, जो आफ्नो पेटको सुगन्धयुक्त विना बाकेर सुगन्ध खोज्न दौडिरहन्छ ।
मंगलसेनबाट गाडी चलेदेखि नै उनको बान्ता रोकिएन । झुप्रीले खोक्दै भनेकी थिइन्, ‘अब त मरे पनि काठमाडौं जादिनँ ।’
बल्लतल्ल काठमाडौं आइपुगिन् । गीत गाइन् । र, ४४ दिन बसेर घर फर्किइन् ।
झुप्रीको काठमाडौं बसाईंका उपलब्धी सुन्न कोही पनि उत्साहित थिएनन् । झुप्रीलाई धाप मारेर स्याबासी दिने पनि भेटिएनन् । बरु भेटेकाले भने, ‘खुब गाउने भएकी । कसले भोट हाल्दोरहेछ, कसको भोटले अगाडि बढ्दोरहेछ हेरौंला ।’
झुप्री दुई हप्ताअघि फेरि काठमाडौं आएकी छिन् । अहिले उनलाई भेट्ने र कुरा गर्नेहरुको लर्को छ ।
तर प्रतिस्पर्धीहरुका आफन्तहरु भेट्न आउँदा उनको मन खिन्न हुन्छ । दुई हप्ता अगाडि मोबाइल समाएकी झुप्रीले निराशा पोख्छिन्, ‘सबैका आफन्तहरु भेट्न आउँछन् । माया गर्ने भएको भए त मेरा आफन्तले पनि फोन गर्थे होलान् नि !’
झुप्री जति बोल्छिन्, निराशा बोल्छिन् । र, भोलिको दिन पनि अध्यारो देख्छिन् –आफ्नै आँखा जस्तो । तर अहिले उनको जीवनमा जे जे भइरहेको छ, उनले नसोचेको भइरहेको छ । त्यसैले उनले नसोचेरै बोल्छिन्, ‘बाँच्ने मन त कहाँ छ र !’
केही गरेर देखाउँछु भन्ने आँट त पलाइसकेको छैन । तर, उनको मन कलिकति बद्लिएको छ । झुप्रीको बद्लिएको मन बोल्छ, ‘मलाइ घर फर्कनै मन छैन । त्यस्ता गाउँलेको नजिक जानुभन्दा यतै केही काम गरेर बस्न पाए हुन्थ्यो । उनीहरुसँग हात थापेर खान नपरोस् भन्छु । तर देखेको पाइँदैन, लेखेको हुनुपर्छ ।’
तस्वीर : चन्द्र आले/अनलनइनखबर